Muuqaalada Muuqaalada Seychelles ee Soo-booqdayaasha Lure ee ka socda Romania
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Muuqaalada Muuqaalada Seychelles ee Soo-booqdayaasha Lure ee ka socda Romania
News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Safrayaasha ka socda Romania waxay ku raaxeysan doonaan diirimaadka iyo quruxda aan la aqoon ee Seychelles meel fog markay ka soo muuqan doonaan muuqaallo dhalaalaya oo ku wajahan halka ay u socdeen ayaa laga dheehan doonaa shaashadooda telefishanka bisha Oktoobar.
Seychelles ayaa lagu soo bandhigi doonaa bandhig caan ah oo ka socda Romania PROTV La Măruță.
Caan ka ahaanshaha bandhiga ayaa la filayaa inuu si weyn kor ugu qaado muuqaalka iyo muuqaalka Seychelles.
Daawadayaashu waxay fikrad kaheli doonaan cunnooyinka macaan ee Creole iyadoo loo marayo isweydaarsiga madadaalo madadaalo ee udhaxeeya kuugga maxalliga ah Marcus Freminot iyo soo-jeediyaha bandhigga.
Shaqaale ka socda Romania PROTV ayaa ku sugnaa Seychelles dhawaanahan, iyagoo duubayay waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo socdo - laga bilaabo xeebta iyo howlaha banaanka ilaa xulashooyinka dhaqanka iyo madadaalada - oo lagu soo bandhigi doono bandhig caan ah oo la yiraahdo La Măruță.
Bandhigan oo ay baahisay PROTV, waxaa soo bandhigaya Cătălin Maruță oo ka soo jeeda qoys caan ah oo la jecel yahay oo ka tirsan TV-yada Romania. Caan ka noqoshada bandhigga ayaa la filayaa inuu si weyn kor ugu qaado muuqaalka iyo muuqaalka Seychelles ee suuqaas iyadoo xilliga qaboobaha uu bilaabmayo qof walbana wuxuu ku riyoodaa inuu ka baxsado meel fiican oo diirran iyo martiqaad sida jasiiradaha yaryar ee Badweynta Hindiya.
Daawadayaashu waxay fikrad kaheli doonaan cunnooyinka macaan ee loo yaqaan 'Creole' iyadoo loo marayo isweydaarsiga madadaalo madadaalo ee u dhexeeya kuugga maxalliga ah Marcus Freminot iyo soo-jeediyaha bandhigga, Andreea Dociu, oo ay ku diyaarinayaan suxuunta dhaqameed ee dalalkooda.
Kuugga Freminot wuxuu soo bandhigayaa kalluun afka lagu shiilay oo pan-shiilan leh maraqa Creole, iyo sidoo kale digaagga digaagga iyo canbaha loo yaqaan 'camgo chutney' sida weheliyaha halka soo-jeediyaha Dociu uu la imaado cunno cunno weyn oo macaan leh oo lagu sameeyay polenta (galley), jiis parmesan, hilib doofaar iyo ukun.
Cunnooyinka sida gaarka ah loo xushay, ayaa saxeexi doona dhadhanka safarka safarka, iyaga oo ku dhiirrigelinaya inay u safraan Seychelles si ay naftooda ugu dhadhamiyaan dhadhanka cajiibka ah ee aadka u daran.
Shaqaaluhu sidoo kale waxay bilaabeen booqasho Mahé ah, iyagoo duubaya khibrado gaar ah oo maxalli ah oo badanaa dalxiisayaashu seegeen. Waxay booqdeen Trois Frères Distillery oo ku taal La Plaine Ste André si ay u bartaan taariikhda xiisaha leh ee ka dambeysa Takamaka Rum oo maxalliga ah oo ay soo saaraan isla markaana ku raaxaystaan ​​xoogaa dhadhamin macaan.
Maya fasaxa Seychelles waa la dhameystiray iyada oo aan la 'boodboodka jasiiradda' iyo PROTV waxay u soo bandhigi doontaa daawadayaasheeda khibradaha safarka ay ku tagayaan Praslin diyaarad iyo safarka badda jasiiradda La Digue ee u dhow.